﻿	Chocolate Pecan Pie (Ihe Nzuzo-Enyi na Enyi!) - Ezi Ntụziaka
ego ole ka iko otu osikapa na-esighi esi?
esi esi nri larịị ọkụkọ nku na ite ite
n'ụdị ọkpụkpụ ke ọkụkọ ara na poteto
Chocolate Pecan achịcha
Chocolate Pecan Pie bụ ọgaranya ọzọ, jupụtara na pecans na chocolate, yana ihe ijuanya dị mfe ịme.
Nke a gbagọrọ agbagọ na a kpochapụwo pecan achịcha Ntụziaka na-agbakwunye ọkara ụtọ chocolate na ụfọdụ koko na batter. Ihe si na ya pụta bụ achịcha bara ụba na nke buttery nke nwere ezigbo ụtọ pecan chocolate.
Ezumike Nke Ezumike
Whonye na-enweghị mmasị n'ụlọ ala, nri nkasi obi n'ụdị ọnụ mmiri, chocolate dessert?!
Pecans: Crunchy pecans tinye ekpomeekpo na nhazi a (mkpụrụ ndị ọzọ na-arụkwa ọrụ). Toast pecans site na mmiri na oven ma dị jụụ tupu ị gbakwunye na paị maka ụtọ kachasị mma.
Chocolate: Achịcha a na-enweta mkpụrụ okpukpu abụọ nke chocolate na-atọ ụtọ chocolate chips na koko ntụ ntụ.
Na-ejuputa Okwesiri ka achịcha dị na mbụ, ihe ndozi ahụ nwekwara ụfọdụ àkwá, sirop ọka na butter butter.
Echefula ụlọ e mere pịa ude !
Otu esi eme Chocolate Pecan achịcha
Bichaa pecans ruo mgbe ha ga-enwerịrị ọkụ na-esi ísì ụtọ. Jụụ.
Microwave butter na chocolate ibe kwa uzommeputa n'okpuru . Ghichaa na koko koko.
Gwakọta starch ọka na shuga. Add ka amia nsen.
Ghaa na ngwakọta chocolate.
Tinye nti pecans na aka nkpuru chocolate.
Wunye ihe anaghị esi ya achịcha jikọrọ ọnụ . Jiri icho ọzọ chọọ ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ime achịcha na hapụ ya ka ọ jụụ ma ọ dịkarịa ala awa abụọ mgbe ị na-eme ya ka o nwee ike idozi ya nke ọma.
Mee-N'iru & Nchekwa
Otu n’ime ihe kachasị amasị anyị gbasara usoro a bụ na ọ kacha mma ịga n’ihu!
Ime na jụụ kpamkpam. Refrigerate ruo mgbe ọ dị njikere ije ozi (a ga-ejekwa ya na ụlọ okpomọkụ). Ọ bụrụ na ịchekwa ihe karịrị 6 awa, kpuchie achịcha ahụ na ihe mkpuchi plastik. Ọ ga-ewe ihe dịka ụbọchị anọ.
Ikpokọta chocolate pecan pie akpọọ nkụ dịka a gwara gị ma mee ka ọ dị jụụ kpamkpam na tebụl. Kechie ya nke ọma na ihe mkpuchi plastik wee mechaa aluminum foil. Ifriizi ruo ọnwa atọ. Hapụ ya na friji n’abalị ma jee ozi na ude mmiri.
More Ezumike ọkacha mmasị
Ntụziaka Apple Pie - na mfe ime
Ntụziaka nke kranberị
Ntụ achịcha ugu - zuru okè ezumike eji megharịa ọnụ
Omenala Pecan Pie Recipe - Ise-kpakpando uzommeputa
Ndị ezinụlọ gị ha hụrụ Chocolate Pecan Pie a? Jide n'aka na ịhapụ okwu na ọkwa n'okpuru!
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri1 aka elekere 10 Nkeji Oge Chillabụọ awa Oge zuru ezu3 awa iri abụọ Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Ejiri chocolate na pecans savory, Chocolate Pecan Pie bụ ihe eji megharịa ọnụ maka ezumike ahụ! Bipute Ntụtụ
▢9 inch achịcha jikọrọ ọnụ asaghị
▢1 ¾ iko pecans
▢⅓ iko bọta
▢½ iko ọkara ụtọ chocolate ibe ekewa
▢1 ngaji koko ntụ ntụ
▢⅔ iko ọcha shuga
▢1 ½ teaspoons ọka
▢¾ iko ọka sirop
Kpochapu oven na 350 Celsius. Dechaa efere 9 'paịl na achịcha na-adịghị mma.
Debe pecans na oven na mpempe mmiri ma ghee minit 6-8 ma ọ bụ ruo mgbe keisi.
Ikpokọta bọta na ¼ iko chọkọletị na obere efere na ngwa ndakwa nri na 50% ike na-akpali akpali oge ụfọdụ ruo mgbe agbazere, ihe dị ka nkeji 1. Ghicha ya na koko ntụ ma dozie ya ka ọ dị jụụ.
Gwakọta shuga na ọka na-etinye n’ime efere iji hụ na ọ nweghị akpụ.
Tinye akwa na nnukwu efere ma jiri nwayọ gbanye. Tinye ngwakọta shuga, sirop ọka, na chocolate / butter mix.
Ghichaa 1 ¼ iko nke pecans ma gbakwunye n'ime ngwakọta ngwakọta tinyere ibe chocolate ndị fọdụrụ. Gwakọta nke ọma.
Enubanye njikere achịcha. Jiri icho ọzọ chọọ ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ime achịcha 55-65 nkeji, ma ọ bụ ruo mgbe e debere ndochi. Kpoo kpamkpam, ọ dịkarịa ala awa 2.
A ghaghị iju achịcha a achịcha tupu ị na-eje ozi. A ga-ebu ụzọ mee achịcha pecan a tupu oge eruo. Ime na jụụ. Friji ruo mgbe ị na-eje ozi. Ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ, akpọọ nkụ ma jụụ kpamkpam. Kpokọta achịcha achicha maka ọnwa 3. Na-agbaze n'abali na ngwa nju oyi ma weta ụlọ okpomọkụ tupu ị na-eje ozi.
Na-eje ozi:1iberi,Calorisị:1492,Carbohydrates:Ogbe 160g,Protein:19g,Abụba:88g,Abụba Ajuju:28g,Cholesterol:82mg,Sodium:Ogbe 1032mg,Potassium:403mg,Eriri:9g,Sugar:46g,Vitamin A:338IU,Vitamin C:1mg,Calcium:81mg,Iron:7mg
Isiokwukacha mma Chocolate Pecan achịcha, Chocolate Pecan achịcha, Chocolate Pecan achịcha, esi mee ka Chocolate Pecan achịcha N'ezieDezaati, achịcha Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .